Tsy ny hadalan’ny maro no fahendrena… | NewsMada
Tsy ny hadalan’ny maro no fahendrena…
Ahoana ihany izy ity? Tsy inona fa ny amin’ny tsy fanarahan-dalàna amin’izao fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana solombavambahoaka izao. Misy ny antoko na kandidà sasany mampiaka-peo sy velon-taraina amin’izany. Fa ahoana? Misy, hono, ny mampiasa fahefam-panjakana, fitaovam-panjakana… Aiza ny hoe tany sy ny fanjakana tan-dalàna amin’izany? Ireo izay mifanala hazakazaka ho mpanao lalàna izao no tsy tan-dalàna.
Tsy takona afenina fa mahatonga ny fampitandreman’ny Ceni efa ho lava ny fametahana petadrindrina tsy mandeha amin’izay izy intsony: gaboraraka tanteraka. Aiza izao izay hoe fampiharan-dalàna eo rehefa tena ao anatin’ny fampielezan-kevitra ofisialy? Andrasana izay tena fanenjehana araka ny lalàna sy ny fitsarana mba tsy samy manao izay saim-pantany ny rehetra. Toa vao mainka mitombo aza ny tsy fanarahan-dalàna.
Mandra-pahoviana izay tsy fanarahan-dalàna izay? Na hatrany amin’ny fandatsaham-bato sy ny fanisam-bato ary ny fitaterana ny voka-pifidianana, sanatria… Ny amisavisana ny ratsy, hiavian’ny soa. Tsy te hanan-dratsy tsinona. Vokatry ny tsy fanarahan-dalàna toa efa zary mahazatra, fomba amam-panao, na mety ho kolontsaina aza: izay manaja lalàna indray izao no diso, maty antoka, ilaozan’ny tantara, ahina tsy ho tafavoaka…
Izay ilay hoe ny hadalan’ny besinimaro no toa fahendrena? Tsy misy bedy tsinona na inona fahadisoana sy tsy fanarahan-dalàna. Na samy manao hadalana avokoa ny rehetra ka tsy hita intsony izay enjehina? Faty be mora efaina izany: rehefa maro na ny rehetra no indray manao hadalana, tsy hita intsony izay anaovana azy. Vitavita sy tsy hitahita ho azy amin’izao. Izany aza no heverin’ny sasany ho tsy maninona, mety, fomba, fahendrena…
Sanatria, izany ve izao tsy fanarahan-dalàna saika efa mila ataon’ny rehetra amin’izao fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana solombavambahoaka izao? Na tsy hita intsony izay hotahafina sy azo inoana amin’ny hoe fanajana sy fampiharan-dalàna… Ny hadalan’ny maro tokoa ve, sanatria, no ndeha hatao na heverina ho fahendrena?